Archive du 20200616
Rivo Rakotovao Hanarona ny vitan-dRajao ve no mahamaika eto ?
Fanatsarana ve sa fanakonana ny teo aloha no atao ? hoy ny Filohan’ny Antenimierandoholona mahakasika ny fikitihana ny fotodrafitrasa nataon’ny fanjakana Rajaonarimampianina, toy ny ao Mahajanga.
Praiminisitra Ntsay Christian Laharampahamena ny ady amin` ny kolikoly
Ny Andininy faha-101 ao amin’ny Lalàmpanorenana dia milaza fa anjaran’ny governemanta no manao tatitra ny asa vitany eto anatrehanareo solombavambahoaka
Fomba fiasa sy fitantanana Nokianin’ny firaisamonim-pirenena ny filoha
Ny filoha no tokony tsaraina sy tombanana amin’ny asa vitany. Tsy manana fahalalahana ny praiminisitra sy ny governemanta, fa voabahan’ny Filoha, hoy ny Firaisamonim-pirenena Voifiraisana.
Fampanantenana efa ho lava !
Mirarakopana hatrany ny fampanantenan’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina isaky ny fotoana hanaovany valandresaka ho an’ny vahoaka Malagasy. Tena betsaka sy tsy tambo isaina, ary matetika misy zava-baovao isaky ny tapa-bolana.
Minisitry ny atitany “Afaka mandeha malalaka ny zotra rejionaly”
Nanamafy ny voalazan’ny Filoham-pirenena ny minisitry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana sady Filohan’ny CCO Covid-19 fa ny distrika rehetra ankoatra an’i Toamasina I, Toamasina II, Moramanga, Fenoarivo Atsinanana ary ny Faritra Analamanga dia noezahina hiverina amin’ny laoniny ny fiainana andavanandro.
Fizahan-tany anatiny “Miandry ny fanokafana ny fifamevezivezena”
Efa miroso amin` ny fametrahana sahady ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahan-tany ny ministeran` ny fitatera sy ny fizahan-tany ankehitriny. Tsy maintsy tsinjovana dieny izao ity sehatra ity hahafahan` ireo mpisehatra miarina ao anatin` izao fahamehana ara-pahasalamana izao,
TANORA MALAGASY Resy lahatra amin’ny Fitsaboana nentim-paharazana ny ankamaroany
Fomba fitsaboana iray nahazo vahana teto amintsika hatramin’ny niparitahan’ny tsimok’aretina COVID 19 ny fitsaboana nentim-paharazana na dia efa ela aza no nisiany.
IPM sy fitondram-panjakana Efa milamina ny resaka ?
1 volana izay no lasa. Nisavorovoro ny sain’ny mpanara-baovao satria tsy nitovy ny antontan’isana mararin’ny Covid 19 navoakan’ny fanjakana Malagasy izay 35 isa sy ny sampan-draharahan’ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana, 67 isa.
Toamasina Maro no mitaraina ho tsy maheno tsiron-kanina…
Maro be ny olona aty amin’izao no milaza fa tsy maheno fofona sy tsy maheno tsiron-kanina, hoy ny loharanom-baovao iray avy any Toamasina. Efa anisan’ny soritraretin’ny coronavirus io, hoy ny fanehoan-kevitra na valin-teny avy amin’ny mpitsabo.